Euro 2020 | Ratopati
यूरोकप फाइनल भिडन्त : कुन नेता कसको पक्षमा ? access_timeअसार २८, २०७८
यूरोकप २०२० को उपाधिका लागि फाइनल भिडन्त हुँदैछ । इटली र इङ्ल्याण्डबीच नेपाली समयअनुसार राती पौने १ बजे लन्डनको बेम्बली रंगशालामा खेल हुँदैछ । फुटबलका हस्ती राष्ट्रहरुको फाइनल भिडन्त हेर्न दर्शकहरु प्रतिक्षा गरेर बसिरहेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका ने...
युरोमा बाँकी टोलीभन्दा इङ्ल्यान्ड कसरी विशेष छ ? access_timeअसार २०, २०७८
युरोकप फुटबलमा क्वाटरफाइनल खेलहरु सकिएका छन् । अब, चार टोलीमध्ये एकले उपाधि जित्नेछ । त्यसमध्ये पनि इङ्ग्ल्यान्डलाई धेरैले प्रमुख दाबेदारका रुपमा हेरेका छन् । यसका केही कारणहरु छन् । घरेलु मैदान जारी युरो कपका सेमिफाइनल र फाइनल खेलहरु लण्डनस्थित बिम्बल...
चेक रिपब्लिक युरोकपको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश, घर फर्कियो नेदरल्यान्डस् access_timeअसार १३, २०७८
चेक रिपब्लिक युरोपक २०२० को क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । फ्रयाङ डि बोरको प्रशिक्षणमा रहेको नेदरल्यान्डस्लाई २–० ले पराजित गर्दै चेक रिपब्लिक क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । आइतबार राति हंगेरीको बुडापेस्टस्थित पुस्कास एरिनामा सम्पन्न खेलमा खेलको ६८ औं र ८० ...
समूह डी : डु अर डाईको अवस्थामा क्रोयशिया access_timeअसार ८, २०७८
२०१८ को विश्वकप फुटबलको फाइनलसम्म पुगेको क्रोयशियाले आज स्कटल्यान्डलाई उसैको घरेलु मैदानमा हराउँछ, वा पहिलो चरणमै घर फर्कन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ मध्यराति मिल्नेछ । युरो कपअन्तर्गत समूह डी को खेलमा मध्यराति १२ : ४५ बजे लण्डनको बिम्बलीमा इङ्ल्यान्ड र चेक गणतन्त्र तथ...
चेक रिपब्लिकसँग बराबरीमा रोकियो क्रोएसिया access_timeअसार ४, २०७८
युरोकप अन्तर्गत शुक्रबार राति सम्पन्न खेलमा क्रोएसिया चेक रिपब्लिकसँग बराबरीमा रोकिएको छ । बराबरीसँगै क्रोएसियाको अबको यात्रा कठीन बनेको छ । स्कटल्याण्डमा भएको खेलमा चेकका प्याट्रिक सिकले पेनाल्टीमार्फत टीमलाई अग्रता दिलाए । तर त्यो अग्रता १० मिनेटपनि टिक्न सके...
एकै देशका दुई टिम भिड्दै, श्रीमान्–श्रीमती डिभोर्सको संघारमा ! access_timeअसार ४, २०७८
आज युरोकपमा संयुक्त राज्य दुई टिम इङ्ल्यान्ड र स्टकल्यान्डबीच लण्डनमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यो खेललाई दुबै टिमले ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । यो खेल अहिले बेलायतको घर–घरमै झगडाको जड बनेको छ । आफु स्कटिस समर्थक रहेको भन्दै एक महिलाले आफ्ना इङ्लिस श्रीमान्सँग...
युरोकपमा आज को–को भिड्दै ? कसको खेल कस्तो ? access_timeअसार ३, २०७८
युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज ९ः४५ मा डेनमार्क र बेल्जियम भिड्दैछन् । फिफा वरियताको पहिलो नम्बरमा रहेको बेल्जियम प्रतियोगिताकै दाबेदार हो । उसले पहिलो खेलमा रुसलाई ३–० ले हराएर आफ्नो दाबेदारी पेश गरिसकेको छ । यता, स्टार खेलाडी क्रिष्ट्रियन इरिक्सन मैदानमै ढलेक...
फिनल्यान्डविरुद्ध रुस विजयी, मिरानचुकको निर्णायक गोल access_timeअसार २, २०७८
युरोकप फुटबलमा रुसले फिनल्यान्डलाई १–० ले हराएको छ । सेन्ट पिटर्सवर्ग रंगशालामा भएको खेलमा घरेलु टोलीबाट अलेक्सी मिरानचुकले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा निर्णायक गोल गरे । यससँगै समूह बीमा दुई खेलबाट तीन अंकसहित रुस दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । समान अंक भएपन...
हेर्न लायक खेलाडी : चम्केलान् त ग्यारेथ बेल access_timeअसार २, २०७८
नेपाली समयअनुसार राती ९ः४५ मा अजरवैजानको बाकु शहरमा वेल्स र टर्कीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । सुरुवाती खेलमा स्विट्जरल्यान्डसँग बराबरी खेलेको वेल्स र इटलीसँग पराजित भएको टर्की दुबैको लक्ष्य यो खेल जित्नु हो । ग्यारेथ बेल वेल्सका कप्तान ग्यारेथ बेल प्रतियोग...
इटलीविरुद्ध स्वीट्जरल्यान्ड : लयमा रहेका टोलीबीचको भिडन्त access_timeअसार २, २०७८
युरोकप फुटबलमा नेपाली समयअनुसार मध्यराति १२ः ४५ मा इटलीले स्विट्जरल्यान्डको सामना गर्दैछ । पूर्व विजेता इटलीले टर्कीलाई ३–० ले हराउँदै आफुलाई यस प्रतियोगिताको दाबेदारका रुपमा उभ्याएको छ । इटलीले पछिल्ला ९ खेलमा लगातार जित हासिल गरेको छ, यसक्रममा उसले २८ गोल ...
फ्रान्सविरुद्ध जर्मनी : यी हुन् हेर्नलायक खेलाडी access_timeअसार १, २०७८
करिम बेन्जामा आफ्नै सहकर्मीलाई ब्ल्याकमेल गरेको आरोप लागेपछि करिम बेन्जामाको अन्तर्राष्ट्रिय करियर झन्डै टुंगिएको थियो । उनी टोली बाहिरै छँदा फ्रान्सले युरो २०१६ को फाइनल यात्रा गर्यो, विश्वकप २०१८ जित्यो । तर, यस्तो सफल टोलीबाट बाहिर रहनुपर्दा पनि बेन्जामाले हरेश मानेनन्...
युरोकै सफल टोली स्पेनलाई स्वीडेनले चुनौती देला ? access_timeजेठ ३१, २०७८
युरो कप अन्तर्गत समूह ई मा रहेको स्पेनले आज सुरुवाती खेलमा स्वीडेनको सामना गर्दैछ । खेल नेपाली समयअनुसार मध्यराति १२ बजे ४५ मिनेट जाँदा सुरु हुनेछ । युरो इतिहासकै सफल टोलीमध्ये स्पेन एक हो । स्पेन र जर्मनीले मात्रै यस प्रतियोगिता तीनपटक जितेको इतिहास छ । त्यस्तै, लग...
म्याच प्रिभ्यू : नयाँ स्वरुपको स्पेनलाई अनुभवी स्वीडेनको चुनौति access_timeजेठ ३१, २०७८
स्पेनले सोमबार राति सेभियामा स्वीडेनको सामना गर्दै यूरो २०२० को यात्रा शुरुवात गर्दैछ । लुइस एनरिकेले पहिलो पटक ला रोजालाई मुख्य प्रतियोगितामा नेतृत्व गर्दैछन् र उनी सकारात्मक शुरुवातको अपेक्षामा रहने छन् । कप्तान सर्जियो बुस्केटलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण प...
म्याच प्रिभ्यू : बेल्जियम भर्सेस रुस – नम्बर एक टोलीलाई रुसको चुनौति access_timeजेठ २९, २०७८
फिफा वरियतामा विश्वको पहिलो नम्बरमा रहेको बेल्जियमले नेपाली समयअनुसार मध्यराति १२ः४५ मा रुसको सामना गर्दैछ । गत संस्करणमा वेल्ससँग आश्चर्यजनक रुपमा पराजित भएर क्वाटरफाइनलबाट बाहिरिएको बेल्जियम यसपटक आफ्नो स्तर प्रमाणित गर्ने मौका कुरेर बसेको छ । रुससँग खेलेका पछिल्ला ...
म्याच प्रिभ्यू : वेल्स भर्सेज स्वीटजरल्याण्ड – कसले मार्ला बाजी ? access_timeजेठ २९, २०७८
युरोकप फुटबलमा नेपाली समयअनुसार आज ६ बजेर ४५ मिनेट जाँदा वेल्स र स्वीटजरल्याण्डबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । पछिल्लो दशक वेल्सले जसरी फुटबल खेलिरहेको छ, त्यो नियाल्दा उसले जस्तोसुकै आश्चर्यजनक नतिजा निकाल्न पनि सक्छ । २०११ मा फिफा वरियताको १ सय १७ औँ स्थानमा रहेक...
आजदेखि युरोप कप : जान्नुपर्ने यी तथ्य access_timeजेठ २८, २०७८
कोरोना भाइरस महामारीका कारण गत वर्ष स्थगित भएको युरो २०२० फुटबल प्रतियोगिता शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ । प्रतियोगिताको सुरुवाती खेलमा पूर्व विजेता रहिसकेको इटलीले रोम सहरमा टर्कीको सामना गर्नेछ । प्रतियोगिताको सुरुवाती खेलमा दर्शकदिर्घामा १६ हजार जना उपस्थित हुन...
युरोकपका १० अप्रत्याशित नतिजा access_timeजेठ २७, २०७८
युरोकप फुटबलको ६० वर्षभन्दा लामो इतिहासमा धेरै आश्चर्यजनक नतिजाहरु देखिएका छन् । चाहे डेनमार्क र ग्रिसले उपाधि जित्दा होस् वा आइसल्यान्डले अनपेक्षित रुपमा क्वाटरफाइनलसम्मको यात्रा गर्दाको क्षण होस्, धेरै मानिस चकित खाएका छन् । युरोकप फुटबलका १० वटा अनपेक्...
युरो २०२० : पोर्चुगल, फ्रान्स र जमर्नी एकै समूहमा access_timeमंसिर १५, २०७६
सन् २०२० मा हुने युरोकप फुटबलमा साबिक विजेता पोर्चुगल कठिन समुहमा परेको छ । युरोपियन फुटबल महासंघ (युएईएफए) ले शनिबार राति सार्वजनिक गरेको समूह विभाजन र खेल तालिका अनुसार साविक विजेता पोर्चुगल कठिन समूहमा परेको हो । पोर्चुगल रहेको समुह ‘एफ’ म...
बेल्जियमको गोल वर्षा access_timeमंसिर ४, २०७६
एजेन्सी । सन् २०२० को युरोकपमा स्थान बनाइसकेको बेल्जियमले समूह चरणको अन्तिम खेलमा साइप्रसमाथि गोल वर्षा गरेको छ । घरेलु मैदानमा मङ्गलबार राति भएको खेलमा बेल्जियमले साइप्रसलाई ६–१ गोलले हरायो । बेल्जियमको जितमा क्रिस्टियन बेन्टेकेले १६ औँ र ६८ औँ तथा केभिन ड...
वेल्स युरोकपमा छनोट access_timeमंसिर ४, २०७६
एजेन्सी । निर्णायक खेलमा हङ्गेरीलाई २–० गोलले हराउँदै वेल्स सन् २०२० को युरोकप फुटबलमा छनोछ भएको छ । समूह ‘ई’ अन्तर्गत मङ्गलबार राति छनोटका लागि जित्नै पर्ने खेलमा वेल्सले बाजी मारेको हो । यदी हंगेरीले जितेको भए युरोकपमा हङ्गेरीले नै स्थान ब...